मोटो शरीर भएका युवतीले कस्तो ड्रेस छान्ने ?
मोटो शरीर भएकाहरूले पहिरन छान्दा निकै गुनासो गरेको पाइन्छ । आफ्नो शरीर आफैँलाई भद्दा लाग्ने गरेको बताउने उनीहरू पहिरनको विषयमा पनि उत्तिकै गुनासो गर्छन् । भनेजस्तो कपडा नमिल्ने, नसुहाउने आदि समस्या हुन्छ ।
सकेसम्म ए लाइन र वाई सेपमा कट भएको, लाइक्रा, सिफन, जर्जेट कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि प्लेन, अँध्यारो कलरका कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो कपडामा बीच भाग कहीँ कतै मात्रै डिजाइन गरेको लगाउन जरुरी छ । यसो भयो भने मोटा युवतीले आफूलाई स्लिम देखाउन सक्छन् । सकेसम्म तपाईंहरूले समय परिस्थितिअनुसार यस्ता खालका पहिरन प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
यदि तपाईं पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति फरक ड्रेसअपमा सजिनुपर्छ । तपाईंले पार्टीमा जाँदा गाउन, अम्रेला कुर्ता, कोट स्टाइल लेहेंगा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
क्याजुअलमा पहिरन छान्न खोज्नुभएको छ भने लुज टिसर्टमा कपडाको पाइन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि टिसर्टको बदलामा सर्ट लगाउने हो भने त्यसको हातको बाउला लामो हुनुपर्छ । त्यस्तैगरी, तपाईंहरू ए लाइन सेपको वानपिस पनि लगाउन सक्नुहुन्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट भदौ २८, २०७४ मा प्रकाशित
२५ स्थानमा विस्फोट विस्फोट गराउनेलाई छुट नदिइने
रोकिएला बुथकब्जा ?
किन हट्यो समानुपातिकबाट २५६ जनाको नाम ?
कामचलाउ सरकारका सबै निर्णय उल्टिन्छन् : ओली
१० महिनामा साढे ७ लाख पर्यटक नेपाल आए
प्रकाशमानको किल्लामा धावा बोल्दै मिश्र र शर्मा